Nagu saabsan - Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd.
Sii Jawaab celin
Korontada RP Graphite
Farshaxanka HP Graphite
Korontada UHP Graphite
Korontada Graphite impregnated
Ibta naaska ee loo yaqaan 'Graphite electrode'
Qaybo qaabeed garaaf leh
Dukaan wax soo saar
Wac Taageero + 86-13212161818
Taageerada emaylka yidongcarbon@163.com
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. waa soo saaraha koronto yaqaan xirfadle ah una dhoofisa tan iyo sanadkii 2012. Waxay ku taalaa Handan City, gobolka Hebei halkaas oo loo yaqaan "Shiinaha Waqooyiga Kaarboonada Warshadaha Saldhigga" .Baadhitaanku waa Haboon yahay waana mid aad u dhow ilaa Tianjin Port.
Waxaan ku takhasusay ka baaraandegidda iyo soo saaridda electrodes garaafyada iyo carbon electrodes.Our waxyaabaha si fiican loo iibiyo ee Shiinaha iyo dhoofiyo Southeast Asia, Bariga Dhexe, Russia iyo America.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waa kuwa koronto-yaqaannada loo yaqaan 'Graphite electrodes' iyo 'Carbon electrodes', kuwaas oo loo qaybin karo Regular power graphite electrode (RP), koranto koronto sare (HP), koronto-qabe koronto sare leh (IP), koronto-koronto heer sare ah (UHP), impregnated block graphite, Graphite block, Calcined Petroleum Coke iyo koronto badan oo cufan leh.
Koronto Graphite waxaa inta badan laga codsadaa warshadaha metallurgy iyo kalsiyum carbide, warshadaha fosfooraska-kiimikada, sida birta iyo birta dhalaalaysa foornada korontada, silsiladda warshadaha, fosfooraha jaallaha ah, ferroalloy, titania slag, alumina isku dhafan oo ku dhex dhalaashay foornada quusinaysa .We waxay leeyihiin qadka wax soo saarka oo dhameystiran, oo ay kujiraan walxo ceeriin ah oo la isku daro, kalinta, burburin, baaris, culeys, cajiin, sameynta xariiq, leenka dubista, qalabka uurka, xariiq garaaf garaynta iyo khadka makiinada & qaabeynta.
Waxaan soo aragnay injineero khibrad leh iyo nidaamka xakamaynta tayada adag si loo hubiyo tayada badeecadaheena sidoo kale waxaan soo bandhigi karnaa xirxiradeena xirfadeed iyo xalka gaadiidka.
Shirkadeena waxaa lasiiyay cinwaano sharaf badan sida "amaahda ganacsi ee xadaarada", "haynta qandaraaska shirkad amaah culus", "unugyada aaminka macaamiisha" iwm Waxaan jeclaan lahayn inaan u fidino macaamiisha alaabada heerka koowaad iyo adeega. adduunka oo dhan oo noqo alaab-qeybiyahaaga lagu kalsoonaan karo ee kaarboonka Shiinaha.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd had iyo jeer waxay u hoggaansan tahay ruuxa ganacsiga ee "Horumarinta, hal-abuurnimada, raacdada heer sare iyo iskaashiga guuleysiga". Waxaan leenahay koox tiknoolajiyad adag, qalab wax soo saar oo horumarsan iyo koox maarayn tayo sare leh leh.
Astaanta Macaamiisha ayaa ah ujeedkeenna Guusha Macaamiisha waa guusheena.
Waxaan si adag ugu ballanqaadeynaa:
Abuuritaanka astaamo macmiil oo qumman, fahamka baahida macaamiisha si loo siiyo alaab iyo adeegyo bartilmaameed ah
Ku qanacsanaanta iyo u adeegida macaamiisha 'baahida joogtada ah ee sii kordheysa, abuurista tartan muddo dheer ah iyo fursado suuq macaamiisha ah.
Abuuritaanka ururo adeegyo gaar ah u leh jeegga, rarida, keydinta wax soo saarka iwm oo ku bixin kara jawaab deg deg ah codsiyada macaamiisha.
-La xiriirida macaamiisha si joogto ah, la socoshada macaamiisha adeegsiga alaabooyinka la bixiyo, iyadoo la siinayo adeegyo la-talin ah alaabada la soo saaray
-Waxaan jawaab ka bixin doonnaa jawaab celinta macaamiisha 24 saacadood gudahood.
-Waxaan jeclaan laheyn inaan ku guuleysano iskaashi macaamisha macaamiisha.
Khudbada Maareeyaha Guud
Waad ku mahadsantahay dareenkaaga iyo taageerada aad siisay Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd Waqtigan xaadirka ah, alaabooyinkayagu kuma baahin oo kaliya dalkeena oo dhan, laakiin sidoo kale Yurub, Ameerika, Koonfur-bari Aasiya iyo gobollada kale, Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee tartan ka geysta dalka Shiinaha .Shirkadaha waa inay lahaadaan awooddooda asaasiga ah si ay u horumariyaan una koraan.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa ruuxa ganacsiga ee "Horumarinta, hal-abuurnimada, raacdada heer sare iyo iskaashiga guuleysiga" .Waxaan heysanaa koox teknolojiyad adag, qalab wax soo saar oo horumarsan, kooxda maaraynta waxtarka sare leh iyo heerka koowaad ka dib adeegga iibinta si loo damaanad qaado tayada alaabteenna.
Doorashada Yidong waa in la doorto aaminaad.Waxaan sii wadi doonnaa inaan siino alaab tayo sare leh, tikniyoolajiyad heer sare ah iyo adeeg dhameystiran kadib iibinta macaamiisheena.
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. waa soo saare koronto-yaqaan xirfadle ah oo wax dhoofiya tan iyo 2012.
Si lama filaan ah: garaafka garaafka ee Hindiya ...
Kordhinta kharashyada iyo faa iidada aan ku filnayn ...
Suuqa usheeda dhexe ee korantada garaafka ...
Shirkadeena ayaa si rasmi ah dib ugu bilawday shaqada a ...
Suuqa korantada garaafka ayaa haysa ...